तपाईको मधुमेह पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा हुन्छ यो फल सेवन गर्दा ! | सुदुरपश्चिम खबर
तपाईको मधुमेह पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा हुन्छ यो फल सेवन गर्दा !
विरामीका लागि जामुन अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ । यसले मधुमेहलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिने आयुर्वेदको दाबी छ । जामुनुको बाहिरी बोक्रा निकाल्नुहोस् र भित्रको वियालाई पिनेर धुलो बनाउनुहोस् । त्यसपछियो पाउडर जस्तो बन्ने छ । हल्का तातो पानीमा मिसाएर यसलाई पिउनुस् यसले फाइदा दिन्छ । त्यस्तै अपचमा पनि यो अचुक उपचार हुन्छ ।
जामुनको रुखको बोक्रालाई केही घण्टा पानीमा भिजएर राख्ने र त्यसको सरमा मह मिसाएर विहान बेलुका पिएको खण्डमा पायल्स रोग समेत निको हुन्छ । मधुमेह भएका मानिसले जामुनलाई औषधीको रुपमा प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ । यसलाई आफ्नो खानमा नियमित रुपमा खादा निकै फाइदा हुन्छ ।
जामुनको फमा पाइने केही रसायले रगतमा सुगर लेवलको नियन्त्रण गर्न धेरै काम गर्छ । मौसमी फल भएको कारण यो सधै पाउन सकिँदैन । तर यसोका वियाको प्रयोग तपाईले सधै गर्न सक्नु हुनेछ । जसको प्रयोगले तपाईको मधुमेह पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने छ ।
आयुर्वेदमा जामुनको वियालाई कयौं औषधीको रुपमा प्रयोग गर्रिको पाइन्छ । जसमध्ये एक मधुमेहको उपचार पनि हो । जामुनुको बोक्रा लगायत हटाएपछि बचेको हिस्सालाई सुकाएर यसको पाउडर बनाउनुस् । यस पाउडरलाई विहान बेलुका पानीको साथ खादा सुगर लेवल नियन्त्रणमा आउँछ । gnewsnepal
३ वटा सुन्तलामा भन्दा एउटै अमलामा पाइन्छ बढी भिटामिन
अमला हामीले सधैँ खाइरहेको फल हो । अमला के हो ? भन्ने विषयका सबैलाई जानकारी होला । त्यसै पनि अहिल अमलाको सिजन हो ।...
तितो भयेपनि उपयोगी छ करेला
करेलाको स्वाद तितो भएकै कारण केहिलाई यो साह्रै नमिठो लाग्दछ भने कतिपय मानिसलाई यहि स्वादका कारण करेला मन पर्दछ ।बजारमा पाइने सबैभन्दा तितो तरकारी...
दूध र माछामासु किन संगै खानुहुँदैन एकपटक पढ्नुहोस !
घरमा बच्चाहरुलाई खान खुवाउँदा होस् या हाम्रो बानी भएर नै किन नहोस्, कहिलेकांही माछामासु हुँदा पनि हामी दूध खान छोड्दैनौँ । तर, हामीले ख्याल...
काठमाडौँ – मंगलबार थप ५ सय ७० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा...